အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: မွေးရပ်မြေသို့ အပြန်
30 Responses to “မွေးရပ်မြေသို့ အပြန်”
i miss the places
thanks for ur sharing......
and also miss ya sis
ဒါနဲ့ ကဇင်းဟင်းရည်တော့စားတတ်ပီ တစ်ခြားမိန်းမအိမ်သွားစားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလည်း ..ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာပဲလေ ဟိဟိ...ကတ်သီးကတ်သတ်တွေးမိတာပါ
ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ ရှုခင်းအလှတွေနဲ့ ကံဇင်းရွက် ပုံပြင်လေး နားထောင်သွားတယ်နော်။ ဟုတ်ပ vista ပြောသလို ကံဇင်းဟင်းကြိုက်တာ ကိုယ့်အိမ်အပြင် တခြားအိမ်မှာပါ သွားကြိုက်ရင် ဒုတ်ခေါ....း))
ဥရုချောင်းလေး အကြောင်း ကြားဘူးတယ်.. ဟုတ်ပ့ါနော် ရေတွေတောင် နောက်ကျိလို့ပါလား။ သဘာဝတရားတွေလည်း ပျက်စီးနေပြီနော်။
အစ်မရေ ကိုယ်မရောက်ဖူးတဲ့ ဒေသလေးရဲ့ အကြောင်းကို ဖတ်ရတာ သိပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပဲ။ ညီမလည်း တစ်နေ့နေ့တော့ ကချင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် ဖြစ်နိုင်ရင် မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့ကို ခရီးသွားချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်။ မရောက်ဖူးသေးပေမယ့် ဒေသရှုခင်းလေးတွေတော့ အစ်မရဲ့ဓါတ်ပုံလေးတွေက တစ်ဆင့်မြင်ခွင့်ရခဲ့ပါပြီ။ အစ်မဆက်ရေးမယ့် ကချင်ပြည်နယ်အကြောင်းလေးတွေကို စောင့်နေမယ်နော်။
ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ချစ်စရာလေးတွေကိုဖတ်ရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါနဲ့စကားမစပ် သဒ္ဓါ့အတွက်
ကျောက်စိမ်း ပါလာလား.....။ ကချင်ပြည်နယ်အကြောင်းထပ်ဖတ်ရဖို့ မျှော်လင့်နေမယ်နော်။
ဟဲဟဲ... ကံဇင်း ရွက် ကို ပို သဘော ကျ မိပါတယ်။
မြစ်ကြီး နား အထိ ရောက်ခဲ့ပေမဲ့ဖားကန့်အထိတော့မရောက်ခဲ့ ပါ။
ရထားနဲ့မဲဇာ တော ကို ဖြတ် တက်လာတာလေ။
ဘူတာ နဲ့ လဲ နီးရော ချိုပြုံး ရဲ့ “ ဆွမ်ပရာဘွမ် .. သွေးချင်း တို့ ပျော်ရာ...မြေ ” ဆိုတဲ့ 
သီချင်း ရထား ပေါ် မှာ စဖွင့်ပေး လို့ကြည်နူး လိုက်ရတာ ပြန်တွေး မိတိုင်း...။
အပျိုကလေးတွေဆို အောက်ကလုံချည်ဘဲရှိတယ် အပေါ်ကဆွဲကြိုးတွေနဲ့ဖုံးထားတယ် အအိုတွေကတော့
ရွာအတွင်းထဲအထိသွားချင်ပေမဲ့ လိုက်ပို့တဲ့သူတွေကမသွားရဘူးဆိုလို့ လှည့်ပြန်လာခဲ့ရတယ်ဗျာ-
အဲဒီရွာကကျောက်စိမ်းရိုးရာဆွဲကြိုးကလေး ကိုတော့ဖြင့်သတိရနေပါသေးတယ်ဗျာ တရွာလုံးမှာအဲဒီတကုံး
ထဲဘဲရှိတာတဲ့-စာရေးတာနဲနဲရှည်သွားတယ် ဂျစ်တူးပြောချင်တာကအဲလိုရိုးယာဆွဲကြိုးကလေးများ ချောတို့စီမှာမရနိုင်ဘူးလားလို့ပါ
မြစ်ကြီးနား၊မြစ်ဆုံ၊ ပူတာအို သွားမယ်လို့ ကြံထားတဲ့နေရာတွေပါ၊ ဆည်တွေဆောက်၊ ဗုံးတွေပေါက် ကိုယ်ရောက်သွားရင် လှပါမလား၊ ရူခင်းလေးတွေအတွက် ကြည့်ရတာ ကျေးဇူးပဲ။
Thanks so much. I want to know MORE about ur hometown.
April 22, 2010 at 4:32 AM
ကိုယ်ရောက်ဖူးတဲ့ နေရာလေး ဆိုတော့ သတိရတယ်ဗျာ။
အခု မချော ရေုးပြထားတဲ့ နေရာတွေမှာ တစ်ပတ်လောက် နေခဲ့ရတယ်။
ဆိုင်းတောင် လမ်းမ ပုံမှာ ရိုက်ထားတာ အဲဒါ ကျနော့်သူငယ်ချင်း အိမ်ပဲ။
တည်းဖြစ်တာတော့ လုံးခင်းမှာပေါ့. . ။ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ တော်တော် ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ တော်တော်လည်း ခင်ဖို့ ကောင်းသလို ၊ တော်တော်လည်း ခင်ခဲ့တယ်။ သတိအရဆုံးကတော့ “ ချင်ဆော်ခါး ” ကိုပဲ..အဟဲ..။
မြန်မာပြည်ထဲမှာ ကချင် နဲ့ ချင်း ပြည်နယ်တွေကို မရောက်ဖူးသေးလို့သွားလိုစိတ်ပြင်းပြနေခဲ့ရတယ် ။ ခုလို ပုံလေးတွေ တွေ့ လိုက်ရတော့ ပိုပြီးသွားကြည့်ချင်လာတယ် ။ ဥရုချောင်းဆိုတာ စာထဲမှာ ပဲ ကြားဖူး နားဝ လေ .. ခုတော့ ချောင်းလဲ တိမ်ကော နေပြီဆိုလို့စိတ်မချမ်းသာစရာပဲ ။ သဘာဝ အလှတွေ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ အရေးကြီး တယ် ဆိုတာ သိသိကြီးနဲ့ ဒီလို ဖြစ်ရတာနော် ... ကချင်ရိုးရာ စားစရာ တွေလည်း စားကြည့်ချင်လိုက်တာ ။
ခုလို ပုံ နဲ့တကွ တင်ပြပေးတာတွေ အတွက် ကျေးဇူးနော် .. နောက်ထပ် အပိုင်းတွေကို ဆက်လက်စောင့်မျှော် နေပါတယ် ။
မရောက်ဖူးသေးတဲ့ နယ်မြေ ဖြစ်လို့ စိတ်ဝင်စား ပါတယ်။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် မချောပြန်လာတော့ ကျောက်တွေ ပါလာတယ်ဆို
ဂျီးတွန်းကျောက် ပြောတား)
မမရေ... အဟင့် အဟင့်
မချောရေ ကိုယ်တိုင် သွားလည်ချင်စိတ် ပေါက်လာပြီ။
အိမ်အပြန်လေး ကို လာရောက်နှုတ်ဆက်ပါတယ်.. ညီမ တို့ ဖားကန့်ထိတော့ မရောက်ဘူးသေးဘူး မြစ်ကြီးနားထိဘဲလေ..
ညီမ ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ကြမှ ကံဇင်းရွက်ချဉ်ရည် နဲ့ ရှယ် အဝလာစားမယ်နော် သေချာဖိတ်ရမယ်
မမရေ...ပြောပြီးတဲ့ အတိုင်းပါပဲ...မြစ်ကြီးနားကို အရမ်းလွမ်းသွားပြီ...အဲဒီလမ်းမကျယ်ကြီးတွေပေါ်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ နေရာအနှံ့ စက်ဘီးစီးခဲ့ကြဘူးတယ် :(((
ထုခွဲ ချရောင်းပီးးးးးး မြန်မာပြည် မြန်မြန်ပြန်လာချင်လို့............း)))
ကံဇင်းရွက် အကြောင်းလေးဖတ်ပြီး ကချင်ပြည်နယ်ကို တကယ်ရောက်သွားသလိုပဲ မချောရေ...
နွယ်လေးပြောသလို...“ကံဇင်းဟင်းကြိုက်တာ ကိုယ့်အိမ်အပြင် တခြားအိမ်မှာပါ သွားကြိုက်ရင် ဒုတ်ခေါ”..းးးး))))
April 24, 2010 at 4:35 AM
ဖားကန့်က ကျောက်စိမ်းမှော်တွေက နာမည်ကြီးတယ်လေ ...
ကျွန်တော်တို့ အိမ်က အရင်ကကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းလုပ်တယ် ... ကျောက်စိမ်းအရိုင်းတုံးတွေကို ဖားကန့်က၀ယ်ပြီး ထုခွဲတယ် ... နောက်ပြီး ဥတိပွား ..ကွမ်ရင် .. မြင်း .. ဆင် .. နဂါး ... ပန်းအိုး အစရှိတဲ့ ရုပ်ထုတွေ ထုတယ် .. နောက်ပြပွဲမှာ ရောင်းချတယ် ...
ငယ်ငယ်ကလေးထဲက မြစ်ကြီးနားကို သွားချင်ခဲ့တာပါ .. ကျွန်တော့်အဖေက တခါမှ မခေါ်သွားခဲ့ဘူးပါဘူး ..
ငှက်ဖျားပေါတယ် ဆိုလို့လေ ... ခုတော့ ပုံလေးတွေ မြင်ရတော့ မြစ်ကြီးနားကို သွားချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ် ...
စိတ်ဝင်စားစရာ ဗဟုသုတတွေ တပုံကြီး ရလိုက်တယ်။
အထူးသဖြင့် ကံဇင်းရွက်ချဉ်ရည်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ စားချင်လိုက်တာ။
ဖားကန့်ရဲ့ ကျောက်စိမ်းမှော် အကြောင်းလည်း သိချင်သေးတယ်။
နောက်...ဘယ်မှာလည်း ကျောက်စိမ်းတုံး လက်ဆောင်..။ ဟွန်း...။
ကောင်းတယ်ဗျို့ ကိုယ်မရောက်ဖူးသေးတဲ့နေရာကရှူ့ခင်းတွေလည်းကြည့်ရတယ်...နောက်တစ်ခုက ဟင်းတွေမြင်တော့...ဘိုက်ဆာလာတယ်ဗျို့..နောက်လည်းခရီးသွားစာတွေတင်ပါအုံးနော်
မမချောရေ ပူးတေတို့လဲ မြစ်ကြီးနားဘက်သွားချင်နေကြတာ... ဒီတခေါက်ပြန်ရင်သွားဖို့ စိတ်ကူးထားတယ်... သွားဖြစ်ရင် မမကို ဆက်သွယ်လိုက်မယ်နော်...:D
စားတောင် မစားဖူးသေးဘူး ကံဇင်းရွက် ကိုကြိုက်ချင်နေပြီ
ကချင်ဖြစ်နေရဲ့သားနဲ့တောင် အခုထက်ထိ ဖားကန့်ကို တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးသေးဘူး.. အခုလို ကချင်ပြည်နယ်အကြောင်းတွေ ဖတ်ရတာ လွမ်းလိုက်တာ.. ကျောက်စိမ်းမြေကြီးလည်း အိုလို့နွမ်းလို့ပေါ့....
Kachin State is my dream land since I wasayouth. I read quitealot about Kachin State. Your blog refresh my memories and my dream. Moreover your articles are good. Thank you.
မချောရေ cherry က ဖားကန့်ကပါ။ဖားကန့်ကိုဘယ်တုန်းကလာလိုက်တာလဲ။သိတောင်မသိလိုက်ဖူး။
Ever welcome ပါ။စိမ်းလန်းသာယာတဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ကနေ အားလုံး အားလုံးကိုကြိုဆိုလျက်ပါ။ ကျေးဂျူးကဘာဆိုင်းရော်။